कहिले हुन्छ अक्षयको 'बच्चन पाण्डे'को प्रदर्शन ?
अभिनेता अक्षय कुमारको चलचित्र 'बच्चन पाण्डे’को प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको छ । चलचित्र मार्च १८ मा प्रदर्शन गरिने भएको छ भने अक्षय कुमार चलचित्रमा फरक रूपमा देखिएका छन् । साजिद नाडियाडवालाको निर्माणमा तयार भएको चलचित्रलाई फरहाद साम्जीले निर्देशन गरेका छन् । चलचित्रमा अक्षयसँगै नायिकाका रूपमा कृति सेननले साथ दिएका छन् । अक्षय कुमारले चलचित्रको एक तस्व...
अल्लु अर्जुनको ‘अला वैकुण्ठपुरमलो’को हिन्दी डब रोक्न ‘शहजादा’ टिमले तिर्‍यो ८ करोड
वरुण धवनको फिल्म ‘भेलिया’ को फर्स्ट लुक सार्वजनिक, प्रदर्शन मिति कहिले ?
एजेन्सी, ९ मंसिर । बलिउड अभिनेता वरुण धवन र कृति सेन फिल्म ‘भेडिया’ मा देखिने भएका छन् । दिनेश विजनको यो फिल्म मार्फत वरुण र कृति दोस्रो पटक ठूलो पर्दामा सँगै देखिनेछन् । दिनेश विजनको प्रोडक्सन हाउसको ‘स्त्री र रुही’ पछि भेडिया तेस्रो कमेडी फिल्म हुनेछ । बुधबार चलचित्रको लोगो सार्वजनिक गरिएको थियो । आज […]
कृति सेनन र पंकज त्रिपाठी अभिनीत ‘मीमी’ जुलाई ३० मा प्रदर्शन हुने
एजेन्सी। बलिउड अभिनेत्री कृति सेनन र पंकज त्रिपाठी अभिनीत सिनेमा ‘मीमी’को प्रदर्शन मिति घोषणा भएको छ। अभिनेत्री सेननका अनुसार फिल्म जुलाई ३० मा नेटफ्लिक्स र जियो सिनेमाको ओटिटी माध्यमबाट प्रदर्शन हुनेछ। सँगै फिल्मको ट्रेलर पनि तीन दिनपछि सार्वजनिक हुने उनले बताइन्। उक्त सिनेमालाई दिनेश विजानले निर्देशन गरेका हुन्।